လူမှုမီဒီယာခေတ်တွင်အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာသည်အဘယ်ကြောင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သနည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2017 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2017 Corey Bloom
ဒီလိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်တိုအတွင်းနည်းပညာဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတာကြည့်ရတာတော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်လွှမ်းမိုးနေသည့် Napster၊ MySpace နှင့် AOL dial-up တို့၏အချိန်များကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများသည်ဒီဂျစ်တယ်စကြဝinာတွင်အထွreme်အထိပ်ရောက်နေပြီ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ Instagram မှ Pinterest သို့၎င်းလူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။ လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်မည်မျှကုန်ဆုံးသည်ထက် ပို၍ မကြည့်ပါနှင့်။ Stastista ၏အဆိုအရပျမ်းမျှလူတစ်ယောက်သုံးစွဲသည် တစ်နေ့လျှင် ၃၅ မိနစ် လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်များ browsing ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုတောင်မှထုတ်ကုန်များကိုမည်သို့ရောင်းသည်ဆိုသည်ဖြစ်လာသည်။
passive browsers များကိုသစ္စာရှိရှိဖောက်သည်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်အားမည်သို့တိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြပါစို့။
eCommerce၊ လူမှုရေးနှင့် UGC - Forever Connected
eCommerce ကမ္ဘာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရန်အတွက်အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်ခုလုံးကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏စွမ်းအားကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်အမြတ်ထုတ်ရန်ရှာဖွေနေသည့်အတွက်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြားရန်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။
ဒါဆို eCommerce လက်လီရောင်းဝယ်သူများကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ အဖြေမှာအသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုမီဒီယာခေတ်တွင်အသုံးချနိုင်သောအကြောင်းအရာသည်အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။ UGC ကိုအသုံးချရန်နှင့်သင်၏လူမှုရေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်သင်၏အဓိကလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပါမည်။
သူတို့ကအကြောင်းအရာရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်။ ကောင်းပြီ, ငါတို့အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ပြီးအကြောင်းအရာယခုရှငျဘုရငျကိုယုံကြည်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာကြ
သင်၏ Instagram စီးပွားရေးစာမျက်နှာကိုစျေး ၀ ယ်နိုင်စရာကောင်းသောအံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုအဖြစ်သို့လှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုအကန့်အသတ်ရှိသောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သုံးစွဲသူများသည်စာသားကြီးများကိုဖတ်ခြင်းထက်စကင်ဖတ်ရန်နှင့် scroll လုပ်ရန်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ထို့ကြောင့် Instagram သည်ထိုကဲ့သို့သောအင်အားဖြစ်လာပြီးသစ္စာရှိအသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံဗဟိုပြုပလက်ဖောင်းဖြင့်ထုတ်ယူလိုက်သည်။
ဒေတာကသူတို့အောင်မြင်မှုကိုထောက်ခံတယ်။ အမှန်မှာ၊ လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများအနက် Instagram မှ eCommerce စတိုးဆိုင်များသို့အသွားအပြန်သည် ၁၉၂.၄ စက္ကန့်အတွင်းအရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် Instagram ကိုမည်သို့ယှဉ်ပြိုင်မည်ကိုပြသသည်။
ဒါဆိုရင် Instagram ရဲ့စွမ်းအားကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ပြီးစရောင်းဖို့စတင်သလဲ။ သင်တန်း၏အသုံးပြုသူ -generated အကြောင်းအရာ။
Yotpo ခေါ်မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်အသစ်နှင့် Instagram ပေါ်ရှိအသုံးပြုသူမှဖန်တီးထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်တွဲဖက်ရန်ကြိုးစားပါ စျေးဝယ်နိုင်သော Instagram. စျေးဝယ်နိုင်သော Instagram eCommerce အမှတ်တံဆိပ်များအား၎င်းတို့၏ Instagram galleries များကိုစျေး ၀ ယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတကယ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
သင်၏ Instagram ဇီဝနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အပြိုင်ဆိုဒ်တစ်ခု၊ ဝယ်ယူနိုင်သော Instagram layout သည်သင်၏မူလ Instagram စာမျက်နှာ၏ထင်ဟပ်ပုံဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကဖောက်သည်များသည်သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလွယ်ကူစွာ scroll လုပ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံရရှိရန်သေချာစေသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကို ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုမြင်သောအရာများအပြင်။ အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်လိုက်သောအကြောင်းအရာများကိုသူတို့ဖန်တီးလိုက်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
UGC နှင့် Shoppable Instagram တို့ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီး eCommerce လက်လီရောင်းဝယ်သူလက်ရာ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Hamboards များ။ လူကြိုက်များသော Landsurfing လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်သည် Instagram ပေါ်ရှိအသုံးပြုသူများမှဖန်တီးထားသောဓာတ်ပုံများကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သော link များသို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်စွမ်းအားကိုသူတို့သိရှိခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသင်ရလဒ်သည်သန့်ရှင်း။ သုံးစွဲသူများစိတ် ၀ င်စားသောဆိုင်ဖြစ်သည်။
Hamboards ၏ ဦး ဆောင်မှုကိုလိုက်နာပါ။ Instagram ပေါ်ရှိအပြီးသတ် eCommerce အောင်မြင်မှုအတွက် Shoppable Instagram နှင့်အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုတွဲထားပါ။
UGC သုံးသပ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Facebook ကြော်ငြာများကိုလူအများစုမှထင်ရှားစေလိမ့်မည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့လူမှုရေးအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ဟားဗတ်အဆောင်အခန်း၌ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအထိဖေ့စ်ဘွတ်သည် ၂၁ ရာစုတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအောင်မြင်မှု၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကြော်ငြာများကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအတိတ်ကဖောက်သည်များမှအသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ Facebook ကြော်ငြာတွင်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်ထံမှအကောင်းမြင်သုံးသပ်မှုကိုပြသခြင်းအားဖြင့်၊ ကြောင်းထုတ်ကုန်များအတွက် ROI သိသိသာသာတက်။
ယူ MYJSဥပမာအားဖြင့်အွန်လိုင်းလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်။ ၃ မျိုးဆက်ကျော်အောင်မြင်သောရတနာကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လူမှုမီဒီယာများ၏စွမ်းအားနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့် MYJS သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကြော်ငြာခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့သည်။ သူတို့ Yotpo နှင့် UGC ကိုစတင်သောအခါ Facebook မှာကြော်ငြာတွေကို ယခင်ဖောက်သည်များထံမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏မက်ထရစ်များသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ UGC သည်ဝယ်ယူမှုနှုန်းကျဆင်းမှု ၈၀% ကျဆင်းခဲ့ပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းမှာ ၂၀၀% တိုးခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာနေရာသည်ထောင်နှင့်ချီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သင်၏ Facebook ကြော်ငြာများတွင် UGC ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုရရန်အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။
Pinterest - အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာကိုလိုချင်သောသင်၏လျှို့ဝှက်လူမှုမီဒီယာလက်နက်
Social media platform ကြီးများကိုဖော်ပြသည့်အခါမကြာခဏသတိမမူမိဘဲ Pinterest သည်အွန်လိုင်းရောင်းချသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသို့ရေဒါအောက်တွင်ပျံသန်းသည်။ Pinterest သည်အခြားသူများကဲ့သို့အရေးမကြီးဟုထင်မြင်ယူဆချက်သည်ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအောက်ရှိမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆိုကြီးကြပ်သည်။ Pinterest သည်အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းကို ၀ ယ်လိုသည်။
UGC သည် Pinterest ၏အခန်းကဏ္ofတွင်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းအရေးပါသည်။ Pinterest သည်သုံးစွဲသူများမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုဤဘုတ်များသို့ curating ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
အအောင်မြင်ဆုံးသော eCommerce အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သော Warby Parker သည် UGC ကို Pinterest တွင်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချသည်။ သူတို့ကခေါင်းစဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖန်တီးခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘောင်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများသူတို့နေရာတွင်အမျိုးမျိုးသောမျက်မှန်တပ်ထားသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောအွန်လိုင်းသြဇာရှိသူများကိုပြသနိုင်သည်။ ဤဘုတ်အဖွဲ့တွင်နောက်လိုက် ၃၅၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး Warby Parker သည်သုံးစွဲသူများထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အခွင့်အလမ်းကိုသဘောပေါက်ပြီးအမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Pinterest စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ.
သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းစာများအစားသတင်းများမှရယူသည်။ စာကြည့်တိုက်များအစားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသည်။ အရာအားလုံးကိုဒီဂျစ်တယ်လက်ချောင်းထိပ်နားမှာတွေ့နိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေလူထုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုနှင့်ထင်မြင်ချက်များအပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အချက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာဝuniverseာအတွင်းရှိ UGC ၏အရေးပါမှုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာသည်ကုမ္ပဏီနှင့်စားသုံးသူများအကြားယုံကြည်မှုနှင့်စစ်မှန်မှုကိုခံစားရစေသည်။ ၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လုပ်ဆောင်ရန်ရှားပါးသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Instagram၊ Pinterest ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုသူမှပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လာမည့်နှစ်နှင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတူတကွချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်instagramPinterestစျေး ၀ ယ်နိုင်သော instagramugcအသုံးပြုသူထုတ်ပေးအကြောင်းအရာYotpo
Corey Bloom သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာဖြစ်သည် Yotpo။ သူကအသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါကသူသည်သူစားရန်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောနေရာကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Vungle - In-App ဗီဒီယိုများဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပါ